Maqaal: Somaaliya oo soo Ceshatay Dowladnimadii – Radio Daljir
Maqaal: Somaaliya oo soo Ceshatay Dowladnimadii
Abriil 10, 2018 1:31 g 0
kooxda dawlad diid.
Dalkeena soomaaliya,iskuma hayno in uu yahay dal qani ah isla markaana ah mid ku yaala meel halbawle u ah ganaacsiga iyo isku xirka afrika iyo aasiya.Waa dal dunidu aad u danayso dhan juquraafi ahaan iyo dhan dhaqaale ahaanba.Dalkeenu waxa uu dawlad la aan ahaa mudo aad u dheer oo u dhaw nusqarni.
Hadaba waxa dalkeenu taariikh ahaan 1960-1991 oo aynu dawlad ahayn gaaray hormar lixaad leh,kaasoo aynu kamuuqanay hormuudna u ahayn koboc iyo dhismo dalka ah dhan dhaqaale iyo dhan ciidanba qaarada afrika.waxaaba xiliyada qaar laynagu tirin jiray kuwo ciidanka xooga uugu awooda badan uuguna dhisan qaarada afrika oo dhan. dhanka tacliinta mudo yar oo aad ugaaban waxay soomaaliya gaartay waxaan ka dhicin dunida inteeda badan iyo afrikaba oo ah in aynu gaaray in dadkeenu wax akhriyaan waxna qoraan.
Dalka kaliya ee afrika afkiisa qortay dadka u dhashay qaarada afrika oo dhan waa soomaaliya marka laga reebo Ethiopia oo waxaa layiraahdaa iyada lama gumaysan,mudo ayar oo talyaani ah mooyee. laakiin afrikadii la guumaystay majirto hal dawlad oo sida soomaaliya qoratay afkeeda waxna ku barata kuna shaqaysa afkeeda hooyo.
Waligaa xasuuso maskaxdana ku hay,gumaysigii dalkeena haystay inoogama tagin wax aqoon ah,wax dhimo dalka ah oo aynu ka dhaxalay sida afrikada kale.waxaynu kabilawnay dawladnimada soomaaliyeed meel banaan,halka wadamada qaarkood gumaystuhu uu uuga tagay dal dhisan oo ay dhaxleen. Aduunku waxa uu layaabay mudo yar sida ay ku dhacday in dal yaroo afrikaan ah oo aan labarin wax aqoon ah iyo farasmo ah sida ay mudo yar heerkaa ku gaareen.
Hadaynu burburay halkii aynu afrika oo dhan hogaamin lahayn iyo carab waxaynu galay dib u dhac 30 sanadood oo aaan dagaalo sokeeye iyo burbur ku jiro. Asaageen waa ina dhaafay oo maanta afrika ayaynu uliidanaa oo hoos fadhinaa dalkeenii soomaaliya ee ahaa libaaxii afrika. kolkii booskeenii laynaga waa yay ethiopia ayaaba shaan keenii tolatay oo is muu jinaysa.
Dalkeena waxaa kadhashay,oo ka abuurmay cadaw gudeed ah dawlad diid. iyagu waa dad soomaaliyeed oo meel iska dhigay diinteenii,dalkeenii,dadkeenii midna inay xeeriyaan. Waxay doorteen shilimaan iyo in ay calooshooda buuxsadaan oo kaliya. waxay xiriir laleeyihiin cadawga shisheeye iyo isticmaarsiga nacabka ah ee neceb jinsiyada iyo jiritaanka dalka iyo dawladnimada umada soomaaliyeed.
Afkeenay ku hadlayaan,waxay kamid yihiin qabaa ilada soomaaliyeed hadana madoonayaan in aynu noqono oo ahaano dawlad soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed oo xor ah. dawladnimada ayay inoo diidan yihiin iyagaana inooga xun cadawga shisheeyaha ah. waxay haystaan malaayiin lacag ah ileen dal dhanbay dhacayeen 30 sanadood,waxay xiran yihiin dhar xaaraan ah,lacagtoodu waa xaaraan,cuntada ay cunaani waa xaaraan,xaj kuma aadi karaan waxay maal jamciyeen jahanabana waa sugaysaa siday diinteenu inoo cadaysay.
Dawlad diid waa xaaraan quutayaall ashaqaysta isticmaarsiga diidana dawlad soomaaliyeed in lahelo.xaaraantaa ay aruursanayeen 30 kaasanadood ayay doonayaan in ay soo aruursadaan,waxay xasuuqaan dad iyo duunyo wixii kunaalaa soomaaliya.cidkasta waa dileen waxayna ubixiyeen looma ooyaan heerka qooqa iyo kibirka iyo dulmiga ay ka gaareen.maxaa masaakiin la laayay,maxaa ilmayar iyo gabar iyo waayeel rag faylkagalay ilaa naftu kabaxdo! maxaa guryo,maxaa beero,maxaa dahab dadkii lahaa laga dhacay dilna loogu daray. kan weeye ka diidan dawladnimada soomaaliya.
Waxay inoo diidan yihiin,in aynu noqono umad soomaaliyeed oo walaalo ah,isku diin ah,isku dad ah,isku dal ah oo wada ah soomaali. waxay inoo diidan yihiin in aynu noqono dawlad dal nabad ah xasiloon,in aan dalkeena ku raaxaysano oo barwaaqadiisa illaahay ina siiyay inagoo soomaali ah ku noolaano ayay inoo diidan yihiin.in caruurta soomaaliyeed wax bartaan,qofwalbaa xaqiisa helo,amaan helo,sharci iyo kaladanbayn jirto ayay inoo diidan yihiin.indhahoodu ma arki karaan soomaali dawlad ah!!.
Dadaka soomaaliyeed ee dibadaha iyo dalalka shisheeye qoxootiga ku ah marabaan in ay dib uugu soo noqdaan dalkooda,waa cadaw fog oo ku xiran shisheeye. aduunkana dad baynu nahay oo waa iska qabanaynaa oo ka sifaynaynaa dalkeena cadawgaan dawladiid,aa khirana illahaay xisaabtiisa iyo cadaab daran baa sugaya waxay danbi iyo gabood fal galeen dawladiid.
Kooxda CITIRAAF LEEY
Kooxdan waa kuwa arin lawadaaga kooxda dawladiid laakiin ka mabda duwan. Citiraaf leey,waa koox xagjir ah halisna ku ah iyo khatar wada jirka umada soomaaliyeed.waxay ka dhisan yihiin gobolada waqooyi halka dawladiid uu ka jiro gobolada koonfureed. ahdaafta iyo doonista citiraafleey waxay kasoo maaxatay oo salka ku haysaa,gumaystihii cadaanka ahaa ee dalka soomaaliyeed kala qoqobay ee qaybiyay 1884 magalada baarliin ka hor majirin. waxay rabaan in lawaayo 5 tii soomaaliya loo qaybiyay wax kalaba daayoo xataa laba israacda.markaa waxay u xarbinayaan in ay hirgaliyaan oo fuliyaan u jeedkii gumaystaha ee kala qaybinta soomaaliyeed.
Maxay kolkaa iyagu helayaan kooxdan citiraafleey? waxaa lagu ababiyay loona sheegay in ay marwalba iyagu ahaanayaan kowa haysta ee xukuma qaybta loogooyay,markaa waxay helayaan guryo waa weeyn,lacag iyo dadkoo ay xukumaan waligood.sidaa daraadeed in ay intooda la go aan bay rabaan. waxaa hadaba lagu xiray in ay shaqo qabtaan si ay u helaan citiraaf. waxaana loo tilmaamay in hadii koonfur qarax iyo dil iyo is khilaaf ay sidaa u sii ahaato oo dawladi ka dhalan waydo shaqaysa oo amaanka sugta,in iyaga kolkaa ay helayaan citiraaf. waana mabaadii lagaliyay oo ka dhaadhacday,waana sababta ay u ga shaqaynayaan dilka,qaraxa,iska horkeenka,shacabka koonfureed.
Waxay citiraafleey xiriir la samaysatay,1991dii kooxda dawladiid,waxayna u qaabilsan yihiin hogaaminta dhanka siyaasada,lacagaha oo dhana iyagaa loosoomariyaa iyo hubkaba intaba,taasoo koonfuri isku baa bi isay.waxay soo galiyaan dhalinyaro afka duuban oo dadka gawracda,waxayna fadhiyaan mogdisho kuwa hogaanka u hayaa,waxay ku jiraan dawladkastoo dhalata,waxayna toos uugu xiran yihiin citiraafleey oo shaqay kahayaan mogdisho gaara.
Hadaba citiraaf leey,iyo dawladiid waxay kukala badalan yihiin citiraafleey dawlad wuu rabaa laakiin mid isaga ugooniya ayuu rabaa,halka dawladiid uu isagu dawlad oo dhanba doonaynin. laakiin waxay isaga mid yihiin in koonfur aan dawlad ka dhalan oo lala diriro dawlad walboo dhalata lagana horyimaado,hub iyo kharash na waxaa bixinaya citiraafleey. dawladiidna waa la adeejina yaa.
Ogaada dadka koonfur kunool mawada aha dawlad diid,laakiin waa dadkamid ah oo fursad u helay xiligii dawlad la aanta,markaa waa layska qabanayaa dawladiid shacabka soomaaliyeed iyo dawlada soomaaliya waa ku baraarugeen dawladiid waana lasugayaa. iyagu cidna uma naxayaan sidaynu soo sheegnay. sidaa si lamid ah kooxda Citiraafleey maha in ay wadaan danaha dadka soomaaliyeed ee dagan waqooyiga soomaaliya,mana aha in dadku wada raacsan yahay ee waa kuwo fursad u helay xiliga dawlad la aanta oo iyaga doonaya danahooda ugaarka ah ee guracan.wax ay u hayaan oo wanaag ah majiro shacabkaa gobolada waqooyi marka laga rabee naftooda iyo jifadooda daba taagan.
kooxahani waa dad kaxun gumaysiga shisheeye,maxaa yeelay iyagu waa inagu dhex jiraan dadkeena ayay kamid yihiin,hadaba waxaa guul ah maanta in shacabkii soomaaliyeed uu baraarugay dal iyo dibad intaba,oo uu ogaaday cadawgiisa gudaha ee hortaagan dawladnimada umada soomaaliyeed. kuwa inoo diidan dawladnimada waa ogaanay waana sugaynaa.
Waxaa maanta mahad leh sadex inaga mid ah uugu horayn madaxwaynaheena mudane Muxamed Farmaajo oo ah hogaamiye wadani ah daacad ah hawlkar ah kana go an tahay dawlad soomaaliyeed oo shaqaysa dhismaheed. waxaa kuxiga raysalwasaaraha umada soomaaliyeed Mudane khayre oo ah tiirka iyo fuliyaha yagleelida iyo dhaqaaqida dawlad soomaaliyeed waa geesi wadani ah taariikhdaaana qoraysa inbadan. qodobka sadexaad waa baarlamaanka umada soomaaliyeed oo u taagan badbaadinta iyo dhaqaajinta dawlad xoog leh oo soomaaliyeed oo hanata dalkoo dhan.
sadexdooduba waxay kahelayaan aduunkana sharaf iyo qadarin aan u hayno dal ahaan iyo dad ahaanba hadaanu nahay shacabkii soomaaliyeed ee mudo nusqarni ku dhaw u oomanaa dawladnimada,aana u hayno had iyo jeer kuna xasuusan doono difaaca jiritaanka dadka dalka iyo dawladnimada soomaaliyeed. xaga aakhirana abaalkoodu waa jano maxaa yeelay waxay badbaadiyeen diinteenii dalkeenii dadkeenii,dalkaaga in aad jeclaato iimaankay kamid tahay.
shacabka soomaaliyeed uuma baahna citiraafleey waayo waaba citiraafanahay oo umadii nabi muxamed ayaanu nahay oo islaam ah waaba citiraafanahay oo umad soomaaliyeed oo calanbuluug ah leh,oo dad iyo dal iyo dawlad jirta ah ayaanba nahay. dawladiid uma baahnin oo waaba arin islaamnimada iyo bini aadnimada iyo xadaarada iyo caqliga kasoo horjeeda in la diido dawladnimo,kolkaa dawladnimo waa ku dhimanaynaa waana nahay dawlad.
Cadawgii soomaaliyeed waa jabay,shacabkii soomaaliyeed ee quruxda badnaa ee haybada lahaa iyagoo walaala ah ayay difaacanayaan dawladnimadooda iyo dalkooda iyo diintooda.soomaaliyana way guulaysatay.muwaadiniinta soomaaliyeedna way kasifaynayaan dalkeena cadawga gudaha.
W/Q Yuusuf Mashruuc
Maraykanka Duqaymo ka geystay gobalka Bari degaano katirsan